kunene: uMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	4 Oktobha 2019	• 4 Comments
Iqela lemigulukudu eyingozi yezikrelemnqa zibulala wonke umntu, iMocro Mafia, ukuhlaselwa kweParool kunye neTelegraaf (ubuncinci, imifanekiso kufuneka isenze sikholelwe). 'Ukusuka kwi-EU kunye nokuchasana nokudityaniswa kwehlabathi' xa kuthelekiswa 'nerhasi epheleleyo ukuya kumbindi'. Abaphikisi bemozulu ngokuchaseneyo 'siya kungena kuyo ngaphakathi kweminyaka ye-12'. AmaNationalists ngokuchasene nobuSilamsi. Amakholwa eendaba xa kuthelekiswa nabamangaleli beendaba. Singamangqina […]
Ibali 'lokufudumala kwehlabathi' ngumdlalo owakheke ngononophelo apho bobabini abapolitiki, amajelo eendaba kunye nabantu abadumileyo badlala indima ekhokelayo. Ayinakuphikwa ukuba imithombo yeendaba kunye nezopolitiko zidibanise iintshukumo zepolitiki ezihambelana nelungelo lokuzincekisa 'ngabakhanyeli' kunye nethiyori yabaxhasi. Oku sikubiza ngokuba 'kukwakha uphawu' okanye 'uphawu'. Lonto […]
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	13 Juni 2019	• 12 Comments
Kwiiveki zakutshanje siye sabona ukuchithwa okulawulwayo kwegama elichanekileyo 'elungileyo'. Loo mzobo kwakufuneka umelwe ngamagqabi aphephile aqeqeshiwe ngokufanelekileyo: ukusuka kuDonald Trump e-US, eMarine nasePen eFransi kuTeerry Baudet e-Netherlands. Loo mveliso kufuneka kuqinisekiswe ukuba ukucinga okubalulekileyo nge [...]
Ukuba sasingakholelwa kwiindaba zakutsha malunga neBrenton Harrison Tarrant, wayenokwenza uhambo olufunekayo olubonakala lubaluleke kakhulu kwimvelo. Ukuxhaswa kohambo lwakhe kwakuza kuvela kwi-Bitconnect eyimali-mali eyimali-mali. Oko kuvezwa njenge-alibi ethembekile. Yintoni ukubetha ngokukodwa iingxelo ukuba i-Tarrant [...]
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	22 Januwari 2019	• 7 Comments
Apha kwisayithi kuye kwaboniswa rhoqo ukuba amajelo amaphephancwadi amanga. Imizekelo isalayo, umzekelo, ukubonakaliswa okubhaliweyo, apho amaqela asekhohlo kunye namanqanaba asebenza kunye nabaphulaphuli abaqashiweyo kwaye izikhankaso ziyenziwa ngokoqobo phambi kwekhamera. I-Zaanse vloggersrel ayikho into ephilayo [...]
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	29 Januwari 2017	• 9 Comments
I Teevendeal ichiza boss Cees H. kunye ukurhoxa KuArdi van der Steur ngoLwesihlanu ophelileyo, Netherlands yabamba kakhulu amnandi. Noko ke, ukuba thina kwimboniselo ntaka ukubona kwenzeka ntoni, sinako ukubona ukuba lo deal engahambiselani ngokomyinge kwisakhiwo projectje urhulumente ngumphunga eninzi. [...]
Iindwendwe ezipheleleyo: 13.878.075